NamasteNEPALI.com: पूर्वलडाकु अहिले शान्ति सेनामा !
पूर्वलडाकु अहिले शान्ति सेनामा !
काठमाडौं, मंसिर २५। कुनै समय राज्यविरूद्ध सशस्त्र युद्वमा होमिँदै मर्न र मार्न तयार हुने माओवादी लडाकु अहिले विश्वको द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । २०६९ कात्तिक १६ मा नेपाली सेनामा समायोजन भएका ८३ जना पूर्वलडाकु शान्ति स्थापनाका लागि यही वर्ष अफ्रिकी मुलुकहरू लेबलान, कंगो र दक्षिण सुडान पुगिसकेका छन् ।
सेनामा समायोजन भएपछि पहिलोपटक माओवादीका पूर्वलडाकुहरू नेपाली सेनाको पोसाक र युएनको निलो टोपी लगाउँदै शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका हुन् । नेपाली सेनाका अनुसार यस वर्ष नै थप ८० जना शान्ति मिसनमा जाँदैछन् ।
उनीहरू अहिले वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । पूर्वमाओवादी लडाकुलाई गत वर्षको वैशाख/जेठबाट मिसनमा जानका लागि प्रशिक्षण दिन थालिएको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ ।
Labels: GUIDE, NEPAL, NEWS